Gunnada sal-dhigida [Etableringsersättning] waa lacag oo Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ku siin karto markii aad ka qaybgalayso barnaamijka sal-dhigidda. Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa gunnado nooc kale ah.
Kaddib markii aad isku qorto barnaamijka sal-dhigidda ayaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ka dalban kartaa Gunnada sal-dhigida [Etableringsersättning]. Bil kasta bisha ku xigta ayaa codsan kartaa gunnada. Habka ugu fudud ee gunnada arjay loo qorto waa iyadoo la adeegsado barta internetka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Isla barta ayaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida arjayga loo qorto ka aqrisan karta iyo sida lacagaha loo bixiyo.
Arjiga gunnada u qoro Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]
Maxaa loo baahanyahay si aan u ilaashado gunnada la-qabsiga?
Waxaad u baahantahay inaad firfircoonaato oo aad shaqo raadsato, haddii aanad wax kale nagula heshiin. Muddada khariiddadeynta ka dib, waa inaad sidoo kale noo soo gudbisaa warbixinta waxqabadka inta u dhexeysa 1-da iyo 14-ka bisha.
Xilliga xaalad sahminta waxaa maalin kasta lagu siin doonaa 231 karoon. Kaddib markii xilliga xaalad sahminta u dhammaado, oo wadajir anaga ku heshiino qorshe waxaa maalin kasta lagu siin doonaa 308 karoon. Maalin kasta oo aad barnaamij sal-dhigidda ka qaybgasho waxaad darteed u dalban kartaa in lacag lagu siiyo. Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa lacago dheeraad ah oo kala duwan:
Haddii aad ka qeyb qaadatid barnaamijka saldhigashada (Barta intarneetka ee Qasnadda Ceymiska)
Haa, waad shaqaysan kartaa markii aan ka qaybgelayo barnaamijka sal-dhigidda. Laakin lacagta Gunnada sal-dhigid way is-dhimaysa hadba mushaharka aad qaadan doonto. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.
Haa, Lacagta waalidiinta [föräldrapenning] waad qaadan kartaa markii aad ka qaybgalayso barnaamijka sal-dhigidda. Laakin lacagta gunnada sal-dhigidda way is-dhimaysa hadba inta ay la eg tahay Lacagta waalidiinta [föräldrapenning]. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.
Haddii qaxooti ahaan, magangeliyo-doone ama qof qaraabo ahaan ruqsadda degenaanshada [uppehållstillstånd] lagu siiyay, waa laga bixin karaa kharashka gaadiidka booqashada Xafiiska Shaqada. Waa mara ugu horeeyso ee aad xafiiska booqanayso.
Ballansashada gaadiidka waan ka caawini karnaa. Warbixin dheeraad awgeed noola soo xiriir.